Element Society - Sheffield oo ah hay'adda ugu weyn ee Horumarinta Dhallinyarada
Waxaan nahay hay'ad samafal ah oo aan faa'iido doon ahayn oo ku salaysan Sheffield, bixinta horumarinta, ficilada bulshada iyo barnaamijyada ganacsiga dhalinyarada iyo dadka waaweyn ee nugul. Waxaan dooneynaa in aan dhallinyarada ku dhiirrigelinno in ay isbeddel wanaagsan ku sameeyaan bulshadooda, kor u qaadaan rabitaankooda, ayna noqdaan jaangooye u gaar ah asxaabtooda.
Ma waxaad tahay da '15 - 17 oo aad rabto in aad ka heshid inta ugu badan xagaaga?
Ku dar NCS waayo aragnimo weyn! La kulan dad cusub, saaxiibo nolol wakhti dheer ah oo xirfad cusub u yeesha CV-gaaga.
Wax badan ka ogow NCS
Baro khibradaha dadka kale
Waalidiinta iyo Masuulka
Ma leedahay wiil ama gabadh, ama ma daryeeshaa qof da 'yar?
Ogow sida barnaamijka 2019 NCS ay u siin karto xagaaga iyo xirfad ayan iloobi doonin.
Su'aalaha ku saabsan khibrada
Kharashku wuu ka yar yahay oo laga yaabo inaad ka fekerto
Dugsiyada iyo Macalimiinta
Ma waxaad tahay qof la shaqeeya dhalinyarada?
Ogow sida barnaamijka NCS u soo bandhigi karo waayo-aragnimo cusub, horumarinta xirfado cusub iyo samee saaxiibo nolol cusub.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan
Shaqooyinka bannaan iyo xilliyada shaqada
Waxaan leenahay aaminaad aasaasi ah oo 3 ah
Iyada oo taageero iyo kalsooni isku kalsoon, dhallinyaradu waxay gaari karaan kuwa aan la rumaysan karin
Anagoo ah hay'ad sadaqoow ah waxaan ognahay in la siiyay qalab sax ah, meel iyo taageero, kuwa aan la rumaysan karin waa la gaari karaa.
Qaar ka mid ah tusaaleyaal dhalinyaro ah oo ku guuleysta inay ku guulaystaan ​​Element Society waxaa ka mid ah: boorsooyinka jimicsiga, ka ganacsiga xayeysiiska suuqyada, dejinta siminaarka iyo isdhexgalka, la dagaallanka xoog sheegashada iyo midabtakoorka, wax ka qabashada dadka naafada ah iyo wax badan oo kale. Maxaad ku dhufaneysaa in abaal-marinnadani aysan ahayn kaliya 'dhaqdhaqaaqa sare' ee caadiga ah laakiin qof walba.
U fidinta dadka dhalinta yar leh awoodda dhabta ah si ay u qaadaan tallaabo wanaagsan oo bulshadooda
Waxaan si joogto ah u bilaabeynaa mashaariic cusub si loo hagaajiyo dhammaan dhinacyada bulshada. Dhallinyaradu waxay ku jirtaa wadnaha dhammaanba horumarkeena cusub oo ah samafalka dhalinyarada.
Qaar ka mid ah mashaariicdeena waxaa loogu talagalay dhallinyarada Sheffield iyo Koonfur Yorkshire. Xitaa qaar badan oo ka mid ah mashaariicdeena waxay leeyihiin dhalinyaro ka horaysa ka qaybgalayaasha kaalin mushahar leh. Dhammaan mashaariicdeenu waxay leeyihiin dhallinyaro ku lug leh marxalad kasta - laga bilaabo fikradda iyo naqshadaynta, u gudbinta iyo qiimeynta.
Dhiirrigelinta dadka dhalinyarada ah inay noqdaan tusaalayaal fiican oo kuwa ku xeeran
Aqoonsiga moodooyinka kaalinta isku midka ah waa hantida xooggan ee horumarinta dhalinyarada kale waxay aasaas u tahay habab badan oo ka mid ah habkeena.
Sidaan oo kale waxaanu siinaa meel iyo fursad aan kaga qaybqaato hay'ad samafal oo kaalin ah halkaasoo ay noqon karaan tusaale wanaagsan. Tani waxaa ka mid ah in xubin ka mid ah Guddiga Dhalinyarada ee qaabeeya istaraatiijiyada ururka iyo jihada mashaariicdeena. Tani waa mid ka mid ah siyaallooyin badan oo aan u dejineyno heerarka ugu fiican ee dhaqdhaqaaqa ah ee loogu talagalay samafalka dhallinyarada
Na soo wac - 0114 2999 210
Email usoo dir - hello@elementsociety.co.uk
Wada-hawlgalayaasha iyo taageerayaasha waxaa ka mid ah:
EFL TRUST // NCS TRUST // XAFIISKA KOOXAHA // WAQTIGA SHEEGASHADA // BADAN BIG // XAQIIQ LA'AAN AH // SHEFFIELD HALLAM // UNIVERSITY OF SHEFFIELD